Wax Ka Ogoow Saxiixyadii Ugu Xumaa Ee Jose Mourinho.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWax ka ogoow saxiixyadii ugu xumaa ee Jose Mourinho.
February 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Jose Mourinho ayeey ku adkaatay inuu karbaash ku sameeyo gorgortanka marka ay timaado inuu la soo saxiixdo ciyaartoy inta uu ku gudajiray xirfadiisa maamul laakiin waxaa lagayaabaa inuu iska indho tirto qaar ka mid ah xidigaha waa weyn oo uu dusha kala socdo.
Hadaba waxaan idiin soo gudbineynaa Ninka lagu neeynaaso The Special One’s’ ee saxiixyada ugu xumaa uu sameeyey abid
15. Steve Sidwell
Steve Sidwell wuxuu hal sano joogay Chelsea Steve Sidwell ayaa lagu tiriyaa xidigihii ugu xumaa ee mourinho soo maray waligiis ee kasoo ciyaaray garoonka Stamford Bridge isagoo xitaa 13 kulan oo premier league oo ugu dambeeyey lasoo xulan.
14. Asier del Horno
Asier del Horno wuxuu yimid Stamford Bridge sanadkii 2005 qiyaastii 8 milyan ginni Fikraddu waxay ahayd in daafaca bidix ee Athletic Club uu noqon doono Wayne Bridge isla markaana Chelsea ay u muuqan karto inay ku tartameyso safka Yurub iyo sidoo kale gudaha.
Dhibaatada kaliya ee yar waxay ahayd inuu gabi ahaanba waxtar lahayn iyo daacadnimo la,aan waa khiyaano uu kooxda uga tagay isagoo ku guuleystay billadaha Premier League.
13. Khalid Boulahrouz.
Maaliyada lambarka 9-aad ee Chelsea ayaa noqotay wax lagu sumoobo tan iyo imaatinka Roman Abramovich – waana arin dhowaanahan la arkay Laakiin markii aad ka fekereyso tirada kooxda Chelsea ee guuldareysatay, Khalid Boulahrouz ma ahan magaca koowaad ee maskaxda ku soo dhaca Xaqiiqdi kuma uusan ciyaarin booska sagaalaad laakiin waxaa la siiyay lambarka shaatiga sabab aan caadi aheyn.
Waxaa Daafacaan lagu soo qaatay 8.5 milyan oo ginni wuxuu labo sano ku qaatay Stamford Bridge wuxuuna ciyaaray kaliya 13 kulan oo horyaalka ah ka hor inta aan loo dirin Stuttgart.
12. Filipe Luis
Filipe Luis ayaa ah daafaca bidix ee Chelsea oo ku guuldareystay Mourinho Waxa ka mid aha liiskayaga saxiixyada qashinka Filipe Luis Xiddiga reer Brazil ayaa ah mid cajiib ah marka loo fiiriyo inuusan runtii aheyn ciyaaryahan xun – wuxuu qashinka u ahaa Chelsea. In kasta oo, si caddaalad ah loo sameeyo, taasi waxay u badan tahay run in ciyaartoy kasta oo liiskan ku jira ay la mid tahay caqabadda Khalid Boulahrouz.
Luis wuxuu ku guul darreystay inuu saameyn ku yeesho galbeedka London waxaana dhawaan dib loogu celiyay Atletico Madrid ka dib hal sano oo uu joogay England.
Radamel Falcao wuxuu ku guuldareystay inuu isku soo saaro garoonka Stamford Bridge Ninka qaldan ee weerarka ka ciyaara ayaa hore ugu guuldareystay inuu soo saaro bandhigyo caajib ah intii lagu jiray amaah hal sano ah oo uu la joogay Manchester United, laakiin hadii uu qof ku soo celiyo sida ugu fiican markaas xaqiiqdii waxay noqon laheyd Mourinho?
Gool kaliya ayuu dhaliyey 12 kulan oo uu ciyaaray tartamada oo dhan, laakiin laga yaabee waxa xitaa ka sii murugooday inay tahay xaqiiqda inuusan u muuqan mid cajiib ahaa Maahan wax iibsasho qaali ah laakiin waa mid aan faa’iido lahayn.
Ricardo Quaresma wuxuu si xun u joogay Milan Ugu dambeyntii ka mid noqday Saxiixyada mourinho kooxda chelsea Ricardo Quaresma ayaa hal sano amaah kula qaatay kooxda Blues intii uu socday wayihii Mourinho ee kooxda Inter ka dib markii tababaraha reer Portugal uu cadeeyay in wadankiisa gabi ahaanba uusan faa iido laheyn.
Gone wuxuu ahaa ciyaartooy si dhib yar u difaacayay Porto, booskiisa waxaa taagnaa qadka dhexe oo gabi ahaanba ka go’ay fikradaha aan runtii u muuqan inay caloosha ku hayaan dagaalka.
Inter ayaa durbadiiba heshay garabka markii uu u saxiixay kooxda Besiktas sanadkii 2010 isagoo hal gool u dhaliyay kooxda Serie A.
9. Jiri Jarosik
Jiri Jarosik ayaa ku guuleysatay billadaha Premier League ee Chelsea Qof kasta oo xitaa meel fog ka raaca kubada cagta Ingariiska waa inuu awoodaa inuu magacaabo inta badan kooxda Chelsea 2004/05.
Blues ayaa ku guuleysatay koobkeedii ugu horreeyay ee Premier League ee sannadkiisii ugu horreeyay ee Mourinho ee kooxda, laakiin waxaa jira hal nin oo la iska illowday Jiri Jarosik wuxuu yimid Stamford Bridge bartamihii sanadkii ugu horreeyay ee Mourinho uu la qaato Chelsea, iyo inuu si fudud u dhigo iskutuso mourinho.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku guuleystey inuu qaado billadaha Premier League ka hor inta uusan u dhaqaaqin Birmingham kaliya sideed bilood ka dib markii uu yimid. Ma ahan joogsi yar.
8. Nuri Sahin.
Nuri Sahin waxaa u saxiixay Mourinho kooxda Real Madrid sanadkii 2011, iyadoo xidiga Jarmalka uu ku yimid tiro la rumeysan yahay ee gaareysay 9 milyan ginni Seddex sano oo uu joogay Santiago Bernabeu, Sahin wuxuu ciyaaray afar kulan horyaalka La Liga Taasi waxay eheed waayo mugdi ah
Xiddiga qadka dhexe ayaa inta badan waqtigiisa Real ayaa amaah uga maqnaa ka hor inta uusan ugu dambeyntii si rasmi ah ugu dhaqaaqin Borussia Dortmund.
Papy Djilobodji uma uusan ciyaarin Chelsea horyaal sidaas darteed Chelsea ayaa runtii qasaaro ku qabtay Papy Djilobodji, laakiin Mourinho ayaa u ogolaaday inuu ku baxo heshiiska naxdinta lahaa.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Senegal ayaa hal kulan u saftay Chelsea sanadkiisii kooxda – 59-ilbiriqsi ayaa ka hor yimid Walsall koobka Carabao kaasoo uu laba jeer taabtay kubada Sababo la xiriira majaajillada kaligiis ayuu ka dhigayaa kan ugu sarreeya 7.
Baba Rahman ayaan kasoo dhalaalin lacagtii Chelsea ka bixisay Waxaad magacaabi kartaa koox 25-ka ciyaartoy ah oo Chelsea ay lacag aad u badan ku qarash gareysay isla markaana markii dambe u hartay inay si aan qasab aheyn uga soo wareegaan amaahda oo ay amaah ugu guuraan.
Baba Rahman ayaa laga yaabaa inuu weli ku fiicnaado Stamford Bridge, laakiin aan daacad noqonno – waa wax aan macquul aheyn.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Ghana ayaa ku jira liiskayaga isagoo u saxiixay Mourinho 14 milyan ginni sanadkii 2015, iyadoo shan jeer amaah lagu bixiyey isagoo 15 kulan u oo kaliya saftay Blues.
Fabio Coentrao wuxuu la qaatay Real 7 sano Markii Real Madrid ay Fabio Coentrao kala soo saxiixatay Benfica sanadkii 2011, waxaa looga hadlay inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha waa weyn ee kubada cagta Yurub – waa wax fiican in la yiraahdo ma aysan helin qiimaha lacagta 30 milyan euro.
Daafaca dambeedka bidix ee reer Portugal ayaa saftay kaliya 58 kulan oo La Liga ah toddobadii sano ee uu joogay Madrid, waxaana amaah loogu diray kooxo kala duwan dhowr jeer ka hor inta uusan ugu dambeyntii u dhaqaaqin kooxdiisii hore ee Rio Ave 2018.
Mateja Kezman wuu sii wadan kari waayey qaabkiisii Eredivisie iyadoo ku adkaatay la qabsiga horyaalka Premier League Markaad ka fekereyso tirada ciyaartoyda Chelsea ee guuldareysatay, ma jiraan magacyo badan oo maskaxda ku soo dhacaya ka hor Mateja Kezman.
Ka dib markii uu u muuqday mid aan laga hor istaagi karin Eredivisie kooxda PSV Eindhoven, Kezman wuu la qabsan kari waayey kubbada cagta Ingariiska wuxuuna ka tagay kooxda ka dib hal sano oo uu dhaliyay 7 ka mid ah 41 kulan oo uu saftay
Ma ahan rikoorkii ugu xumaa ee shaqo joojinta mana ahan heshiis qaali ah – laakiin si kastaba ha ahaatee waxa lagu tilmaamay saxiix qashin ah.
Gedson Fernandes ayaa fursad yar laga siiyay SpursGedson Fernandes waxa uu galay xidigaha ugu dambeeyay liiska qaladaadka kala iibsiga Mourinho Iyada oo kooxo badan oo ka mid ah kooxaha ay u muuqdaan inay u tartamayaan saxiixiisa ka hor imaatinkiisa Spurs iyo lacag dhan 45 milyan ginni oo la isku raacay ciyaaryahanka reer Portugal, way adag tahay in la arko sababta uusan Mourinho u jeclaan.
Laakiin, isaga ma uusan jeclaan, Fernandes ayaa dib ugu laaban doona Benfica isagoo 12 kulan u saftay Tottenham tartamada oo dhan.
Shaqadiisa Alexis Sanchez ayaa hoos u dhacday tan iyo markii uu ka tagay Arsenal Alexis Sanchez ayaa isaga baxay Arsenal waxaana uu u guuray Man united waxaana ay ku noqotay maalmo mugdi ah ku biiristii Manchester United.
Waa wax aan cadaalad aheyn in lagu eedeeyo Mourinho xidigii xulka Chile iyadoo la tixgelinayo inuu rajo weyn ka qabo koox kasta oo uu isagu matalayay, laakiin u dhaqaaqistiisa Manchester United runtii waxay u muuqatay inay kicineyso hoos u dhac.
Waxaan u badan nahay inaanan waligeen ogaan doonin waxa sababay inuu si lama filaan ah ugu dhaco qaabkiisa, laakiin shaki la’aan wuxuu ka mid noqonayaa saxiixyadii ugu xumaa ee Mourinho.
Andriy Shevchenko wuu bixin kari waayey lacagtii weynayd ee ay Chelsea ka bixisay waan ognahay inuu ka badan yahay saxiixa Abramovich marka loo eego saxiixa Mourinho, laakiin markii aad tahay maamule heer sare ah waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato inaad ka faa iideysato waxa lagu siiyay.
Ninka reer Yukreeniyaan ayaa yimid Stamford Bridge isagoo ku kacaya £ 30.8m laakiin sabab ahaan mustaqbalkiisa Chelsea waligiis kama uusan bilaaban Shevchenko ayaa ka mid ah kuwa ugu xun kooxda, waana hubaal inuu yahay saxiixa ugu xun ee Jose Mourinho.